'ကြီးပွားချမ်းသာ' , 'မြန်မာ့ဆိုရိုး' , 'ဆွဲဆောင်စည်းရုံး' , 'အကင်စားစရာ' , 'ကွမ်း' , 'your' , 'ငလက်မ' , 'ဝါးစိုက်' , 'အချုပ်တန်းဆရာဖေ' , 'ဘိလိ' , 'မျက်လှည့်' , 'History of Pyu Alphabet' , 'ဦဝိစာရ' , 'Plant' , 'သဘာဝကုထုံး' , 'လပ်ပရာ' , 'AC' , 'သြစတြေးလျ' , 'သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်' , 'ဗောလ်တဲယား'
ရွှေတိဂုံသမိုင်းအနှစ်ချုပ်နှင့် အဓိဋ္ဌာန်အောင် အံ့ဖွယ်ဌာနများ
သောင်းဝေဦး , ညီညီနိုင် , တက္ကသိုလ်စိုးမိုးနိုင် , သက်ထားခင် , ကိုရိုးကွန့် , အောင်စိုးဦး , ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း , ညိုသစ်ငယ် , Pကျော်
လျှို့ဝှက်ဂမ္ဘီရ တယ်လီပသီဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့် ကျင့်စဉ်များ
လက်ရေးလက်မှတ် သရုပ်ခွဲပညာ (Graphology)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (တနင်္ဂနွေ)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (တနင်္လာ)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (အင်္ဂါ)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (ဗုဒ္ဓဟူး)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (ကြာသပတေး)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (သောကြာ)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နေလဗေဒင် (စနေ)
အောင်ပွဲဝင် ရွှေ့ကွက်များ (Magnus Carlsen)
ခေတ်ကြေးမုံ (အတွဲ ၃) (အနာဂတ်၏ သော့ချက်များ)
အတ္တကျော် , ဟိန်းလတ် , လူထုဒေါ်အမာ , ဒေါက်တာခင်မောင်ညို , ပါရဂူ , ကောင်းသန့် , အောင်မြတ်ဦး , အောင်သစ် , ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း , မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) , နန္ဒာမိုးကြယ် , ဇလွန်ကျော်ဦး , သခင်အောင်ဖေ , တက္ကသိုလ်စိုးမိုးနိုင် , ဝိုင်ချို , လူထုတမန် , မှူးခန့်စံ
၂၀၁၄ ခုနှစ် ရတနာပုံနက္ခတ်နှင့် ထီထိုးနည်းလမ်းညွှန်
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (စနေသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (တနင်္လာသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ - သင့်ကံကြမ္မာ ? (သောကြာသားသမီးများအတွက်) (အိတ်ဆောင်)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၁ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၁, ၁၀, ၁၉, ၂၈) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၂ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၂, ၁၁, ၂၀, ၂၉) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၃ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၃, ၁၂, ၂၁, ၃၀) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၄ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၄, ၁၃, ၂၂, ၃၁) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၅ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၅, ၁၄, ၂၃) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၆ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၆, ၁၅, ၂၄) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၇ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၇, ၁၆, ၂၅) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၈ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၈, ၁၇, ၂၆) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နဝင်းကိုးပွင့် ဂဏန်းဗေဒင် Numberology (၉ ဂဏန်းသမားများ) (မည်သည့် အင်္ဂလိပ်လတွင်မဆို (၉, ၁၈, ၂၇) နေ့တွင် မွေးဖွားသူများ)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချန်ပီယံကျားထိုးနည်း အခြေခံမှ ချန်ပီယံ တစ်ယောက်အဖြစ်သို့ (Zero to Hero)
အောင်ပွဲဝင် စစ်တုရင်ကစားနည်း (Winning Chess)
All of တက္ကသိုလ်စိုးမိုးနိုင် (Myanmar Books) 35 37.45